ReporterNepal Updating you… » Video Gallery
लौ हेर्नुहोस् बैतडी मतदान केन्द्रमा १ सय २ वर्षीया वृद्धाले के गरिन् (भिडियोसहित)
जाँदा जाँदै पनि रुवाएर गए प्रकाश, भावविह्वल प्रचण्ड (भिडियो)
भिडियो : अशोककुमार बस्नेत
ब्युटिसियन डिभा-२०१७ को ब्राइडल प्रतियोगिता
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बुढानीलकण्ठ, नारायणथान
डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक (भिडियोसहित)
किन गरिन् पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले डाक्टर गोविन्द केसीलाई समर्थन? (भिडियोसहित)
BUDDHAKO TOKARI (Video)
Bagalamukhi Temple (Video)
Patan Durbar Square (Video)
ऐतिहासिक सहर कीर्तिपुरमा रहेको उमा–महेश्वर मन्दिर समुद्रि सतहबाट करिब १४१८ मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । यो मन्दिरबाट राजधानी काठमाडौं सहरलाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ । मन्दिर परिसरबाट चो यु, गौरिशंकर, लाङटाङ र गणेश हिमालको दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ । वि.सं. १६५५ तिर राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले भगवान शिव र पार्वतीको आराधनाका लागि यो मन्दिर बनाउन लगाएका थिए ।
सिम्प्ली द बेस्ट महावीर पुन
महावीर पुन एउटा प्रतिष्ठित नाम, सादा जीवन र उच्च विचार उनको जीवनशैली । त्यसैले सिम्प्ली द बेस्ट महावीर पुनभन्दा दुई मत नरहला ।
विद्यासुन्दरको सानदार जित
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले विजय प्राप्त गरेपछि एमालेले विजय जुलुस निकालेको छ । मत गणनास्थल राष्ट्रिय सभागृहमा एमाले कार्यकर्ता भेला भएर शाक्यलाई अखिर, खादा र फूलमालाले बधाई दिए । उनीहरुले शाक्यलाई काँधमा बोकेर सडकमा नारीबाजी गरेका छन् ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर २ मा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजय भएपछि विजय उत्सव मनाइँदै । (भिडियो सौजन्य : श्याम गिरी)
रेडियन्ट इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एजेन्सीले लिटिल प्रिन्स तथा प्रिन्सेस नेपाल आयोजना गर्ने भएको छ । आगमी १९ जेठमा राष्ट्रिय नाच घर जमलमा लिटिल प्रिन्स तथा प्रिन्सेस घोषणा गरिनेछ । सोही कार्यक्रमको अन्तिम नतिजाबाट लिटिल प्रिन्स र प्रिन्सेस चुनिने छन् । उक्त कार्यक्रमका लागि अहिले प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको र विभिन्न विद्यालयहरुबाट सहभागी हुन आएका बालबालिकाहरुले कठोर मिहिनेत र प्रशिक्षण लिइरहेको छ ।
करिब २० वर्षपछि नेपाली जनताले स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्दै छन् । गाउँ, घर, नगर, वडा अनि सम्पूर्ण तह र तप्कालाई निर्वाचनको माहोलले झपक्कै छोपेको छ। विशेष गरेर देशको राजधानी कामाठाडौंलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सबै राजनीतिक दल दिलोज्यान दिएर लागिपरेका छन् । लगभग ४ लाख ५० हजार मतदाता रहेको काडमाडौं महानगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट मेयरका प्रत्यासी हुन्, विद्यासुन्दर शाक्य । चुनावी प्रचारप्रसारमा अत्यन्तै व्यस्त शाक्यसँग गरिएको अत्यन्तै संक्षिप्त कुराकानी ।
स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको प्रचार–प्रसारको अन्तिम दिन (२८ वैशाखमा) कीर्तिपुरमा आयोजित कांग्रेसको चुनावी सभालाई प्रकाशमान सिंह, महेश आचार्यलगायत कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले सम्बोधन गरे । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले कीर्तिपुरको उक्त सभामा गरेको सम्बोधन ।
आज २०७४ वैशाख २७ गते २५६१औँ बुद्ध जयन्ति । देश विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी बुद्ध जयन्ति मनाइन्छ । आजकै दिन सिद्धार्थ गौतमले पिता सुद्धोधन र माता मायादेवीको कोखबाट जन्म लिएका थिए । गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनी अञ्चल कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोटमा भएको थियो । सम्पन्न परिवार र दरवारमा जन्मेका सिद्धार्थ गौतम प्राणी जगतको सुख र शान्तिका लागि सम्पूर्ण सुखसयल छाडी शान्तिको खोजीमा हिँडेका थिए । उनका अहिंसा, शान्ति र ज्ञानका मार्गदर्शनले नै सिद्धार्थ गौतम भगवान गौतम बुद्धको रुपमा रुपान्तरण भएका हुन् । आजको विश्व परिवेशमा भगवान गौतम बुद्धको दर्शन र विचारहरुको अनुशरण गर्न सकेको खण्डमा विश्वमा नै मानव जातिको कल्याण हुने कुरामा दुई मत नरहला ।
ललितपुर महानगरपालिकामा अहिले चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण (३१ वैशाख) मा यहाँ मतदान हुँदैछ । त्यसलै उम्मेदवारहरुलाई भ्याइनभ्याई छ यतिबेला । अधिकांश स्थानमा कांग्रेस–माओवादीले चुनावी तालमेल गरेको भए पनि ललितपुरमा तालमेल हुन सकेन । यही ललितपुर महागनरपालिकामा कांग्रेसको तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार हुन्, चिरीबाबु महर्जन । उनी ललितपुरमा कांग्रेस एक्लैले धेरै मतान्तरसहित जित्ने दावी गर्छन् । मंगलबजार क्षेत्रमा आमसभा गरिरहेको स्थानमै भेटेर महर्जनसँग रिपोर्टर नेपालकी रेनु कार्कीले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी ।